Maalinta Furriinka” oo ay kala tagaan lamaanayaasha ugu badan | Raadgoob
Maalinta Furriinka” oo ay kala tagaan lamaanayaasha ugu badan
Maanta oo kale waa “maalinta Furriinka” ee dalabka ugu badan la gaarsiiyo qareennada arrimaha qoyska qaabilsan ee Britain.
Isniinta ugu horeysa ee shaqada lagu noqdo ee bilkaste oo Janaayo ah, waxaa sare u kaca tirada lamaanayaasha doonaya in ay soo afjaraan xiriirkooda.
Waa xilliga qaar ka mid ah lamaanayaasha ay gudbiyaan su’aalo la xiriira furriin oo shaqo u noqota qareennada.
Dad badan waxay ka walaacsan yihiin in sababta ugu badan ee burburka qoyska ay tahay dhaqaalaha, sida cilmi baarid lagu ogaaday.
Qiyaastii illaa 37 boqolkiiba qoysaska burburay waxay sheegeen in sababta ugu badan ay ahayd cadaadis dhanka lacagta ah. Sidoo kale illaa 22 boqolkiiba waxay sheegeen in muranka ugu badan ee lamaanahooda dhexmaray uu ku saleysnaa lacag, sida lagu xusay cilmi baaridda oo lagu wareystay illaa 2,000 oo qof.
“Xiriirrada guur ee hadda sii burburaya waxay u badan yihiin kuwo ka dhashay khilaaf dhanka dhaqaalaha ah,” sida ay sheegtay qareenka arrimaha qoyska ka shaqeysa, Lorraine Harvey.
Xafiiska Tirakoob ee UK ayaa dhowaan soo saaray tirada lamaanayaasha kala tagay oo ku dhow 107,000 oo qoys in ay burbureen sannadkii tagay. Tiradaasi waxay 5.8 boqolkiiba ka badan tahay middii 2015, waana markii ugu badnayd tan iyo 2009-kii.
In lamaane ay si sharci ah ku kala tagaan aad ayey uga fududahay gudaha UK.
Laakiin arrimaha dhaqaalaha iyo masaruufka caruurta ayaa ah kuwa la isku khilaafo markasta. Haddaba, waa taasi midda sababta in lamaanayaasha kala tagay ay isla aadaan qareeno si ay u xalliyaan khilaafkooda.
Qareennada waxay ku talinayaan in lamaanayaasha kala tagaya ay xal ka gaaraan arrimaha dhaqaalaha ka hor furriinka. Laakiin Waa suuragal in hannaanka loomaro qareennada uu gacan ka geysato xalka.